Ifektri Ekhethekile Ye-Blind Rivet - China Abakhiqizi Bama-Special Blind Rivet, abahlinzeki
Ikhwalithi ephezulu yefektri engenamanzi Seal end rivets blind.
Kuyinketho ebiza kancane, futhi ehlala njalo ongayisebenzisa esikhundleni sama-welds amabala, izikrini, noma amabhawodi, ngeke igqwale noma idle, iqine kakhulu kune-aluminium rivets.
I-Steel Seal Full End Blind Rivet ephelele
I-Steel Seal end rivet eyimpumputhe i-rivet blinder fastener entsha. Akugcini nje kunezinzuzo zokusetshenziswa okulula, ukusebenza kahle okuphezulu, umsindo ophansi, futhi kunganciphisa ukuqina kwabasebenzi, njll.
Inezici zokufakwa uphawu okuhle kwengcezu yokuxhuma kanye ne-riveting yengqikithi ye-rivet eyimpumputhe ngaphandle kokugqwala.
I-Aluminium Seal end rivet eyimpumputhe iyisakhiwo esivaliwe, njengengilazi ebiyelwe i-core-pulling rivet pin core head ibikhiywe ngaphakathi kwekhanda lesipikili, ukudonsa i-rivet kuqediwe, kufakiwe, ingaphakathi lokudonsa izinhloko zezipikili zomsila lidonswa ngokufaka ingaphandle onqenqemeni lomgodi, umgodi ngokulinganisa uvaliwe ngokuphelele ukuze uphile, ikhanda lesipikili lingaqinisekisa ukuthi akukho ukuvuza, akukho ukuvuza.
I-Rivet Egcwele Engagqwali Seal End Blind Rivet
Ama-rivets enzelwe ukufakwa ngesandla. Bangadonswa ngezimbobo zephaneli noma igama elingaphansi. Zenziwe ngezinto ze-elastomer futhi zinokuqina okuhle. Zingafakwa ngokushesha ngisho nasemhlanganweni wokuphazamiseka.
Yonke insimbi engagqwali eyezimpumputhe inzima, inamandla amakhulu okuqina namandla aphezulu we-shear, futhi ayikaze igqwale.
I-Aluminium Peel End Blind Rivet
Luhlobo olusha lwe-fastener e-riveted elula kakhulu yokwenza i-riveting. Ingakhombisa izinzuzo zayo ezihlukile esikhaleni esincane kakhulu noma emvelweni ngaphandle kwesibhamu se-rivet noma ukusetshenziswa kwesibhamu se-rivet. Izingcezu ezimbili noma ngaphezulu ezixhunyiwe zingasuswa ngempumelelo ngokuthepha i-mandrel ngento eyodwa efana nesando.
Ama-rivets ama-Multi-Grip anebubanzi obubanzi bokubamba, ngakho-ke i-rivet imele ukubuyisela ama-rivet ajwayelekile ama-2 noma ama-3. Inganciphisa umsebenzi wokusungula nokuqagela. Ifanele izinhlelo zokusebenza lapho ubukhulu bezinto ezahlukahlukene ngokujwayelekile budinga osayizi abaningi be-rivet. Lolu hlu olubanzi lokubamba lwenyusa ukuguquguquka kokuklama futhi linciphisa ukusungulwa kwe-rivet, okungonga imali eningi. Futhi zinezimbobo ezinkulu futhi ziyamelana nokudlidliza nomswakama.
Ama-rivets ayizimpumputhe we-Full Steel Multigrip enzelwe ngokukhethekile izinhlelo zokusebenza lapho izinto zobukhulu obuhlukile ngokuvamile zidinga ama-rivets ngosayizi amaningi.
Ifaka ububanzi bokubamba okubanikeza ukuguquguquka kwezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene. Futhi zinganciphisa ukusungulwa kwezindleko ze-rivet nezindleko ngokuthatha indawo yosayizi ababili noma ngaphezulu be-rivet "ejwayelekile".
Ama-rivet e-Inter-lock agcwele izinsimbi eziyimpumputhe anamandla amakhulu esakhiwo, ama-multi-grip, ama-fasteners okhiye wangaphakathi aklanyelwe ukunikeza amandla okuphuca namandla amakhulu. Uhlelo lwangaphakathi lokukhiya imishini lunikeza ukugcinwa kwe-mandrel okungu-100%, uphawu olumelana nesimo sezulu kanye nokuhlangana okuqinile kokumelana nokudlidliza.
I-Steel Full High-Blind Rivet Monobolt
Ama-rivet we-monobolt aphezulu anamandla angaboni kahle angama-rivets angaboni kahle anezinduku zokukhiya kanye nokugcwaliswa kwemigodi okuhle kwezicelo zomsebenzi osindayo.
I-Tri-Fold rivet eyimpumputhe yakha imivimbo emithathu yokushicilela ohlangothini lwekhanda lokuvala ngesikhathi sokusetha. Imivimbo emikhulu ebunjiwe isabalalisa amandla okuqinisa amandla ngokulinganayo nangobumnene entweni ebunjiwe. Futhi, indawo enkulu yemivimbo inikela ngokuvikelwa okuhle kakhulu uma i-rivet idonswa ezingxenyeni zesicelo ezithambile kakhulu, ezinomhlwenga noma ezinamaqabunga.
Isakhiwo se-Blind Rivet Hemlock Isakhiwo se-Blind Rivet
Ukuqina High namandla phuca.
Amalunga awanamanzi ngokuphelele.
Ukufinyelela ohlangothini olulodwa.
Ukuqina okuqinile nokusezingeni eliphakeme, ukumelana nokudlidlizela ngenxa yokukhiya kwe-mandrel kwangaphakathi.